पिताले खुट्टा ढोग्न निहुरेकी गर्भवती छोरीको घाँटी काटे, प्रेम विवाह गरेपछि रिसाएका थिए::आर एम खबर
आइतवार, भदौ ८, २०७६ || Sunday 25th August 2019
भारतको मुम्बईस्थित घाटकामेपर इलाकामा दुई दिन अघि भएको २० वर्षे गर्भवती युवतीको हत्याको रहस्य सुल्झिएको छ । अनुसन्धानमा पत्ता लागेअनुसार युवतीले परिवारको मर्जी बिना केही महिनाअघि विवाह गरेकी थिइन् । यसै कारण रिसाएका पिताले छोरीको घाँटी काटेर हत्या गरेका छन् । पुलिसले युवतीको रगतले लत्पत्तिएको शव आइतबार बिहान फुटपाथमा भेटेको थियो । आरोपी पितालाई पक्राउ गरिएको छ । पुलिसका अनुसार मिनाक्षी चौरसिया चार महिनाकी गर्भवती थिइन् । शनिबार उनका पिता राजकुमार चौरसियाले छोरीको अनुहार र टाउकोमा चक्कुले थुप्रैपटक हमला गरे, जसका कारण उनको मृत्यु भयो ।
परिवारको मर्जीबिना गरेकी थिइन् विवाहः
पुलिस अधिकारी अखिलेश सिंहले भने, ‘हामीलाई बताइयो कि उनीहरु फेब्रुअरीमा मध्यप्रदेशको सतना गएका थिए । त्यहाँ मिनाक्षीले बृजेश नामको युवकसँग अदालती विवाह गरेकी थिइन् । पिताले मिनाक्षीको विवाह मुम्बईको विरारमा बस्ने एक युवकसँग निश्चित गरिसकेका थिए । यसका लागि पूरा तयारी गरियो र कार्डसमेत छापियो । तर प्रेम विवाहको कुरा सार्वजनिक भएपछि राजकुमार छोरीसँग रिसाए ।’
खुट्टा ढोग्न निहुरिइन् छोरी, पिताले चक्कु प्रहार गरेः
सिंहका अनुसार मिनाक्षी वृजेशसँग भागेका कारण र मागी विवाह टुटेका कारण राजकुमार चौरसिया लज्जित थिए । यद्यपि, विवाहलाई स्विकार गर्दै छोरीलाई कहिले पनि गाउँ नजान भने । तर हालै जब मिनाक्षी गणपति महोत्सवमा भाग लिन गाउँ पुगिन् तब राजकुमार रिसाए । शनिबार बेलुका छोरी र पिताको फोनमा बहस भयो । त्यसपछि पिताले छोरीलाई भेट्न बोलाए । भेटेपछि मिनाक्षीले पिताको खुट्टा ढोग्न झुकेका बेला चक्कुले हमला गरे ।
सुत्न सक्दैनन् रबि हिरासत मा, छटपटी मै बित्छ रात
बिगत १० दिन देखि पत्रकार रबि लामिछाने चितवन स्थित हिरासत मा छन उनकी श्रीमती पनि चितवन मै बसिरहेकि छिन पहिले ५ दिन म्याद थप
६ भदौ, काठमाडौँ । शुक्रबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अधिकांश भू–भागमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मनसुनको
खाने होइन प्रहरी जागिर ? ३ हजार ८ सय ३१ पदमा खुल्यो दर्खास्त
काठमाडौं, ६ भदौ । नेपाल प्रहरीले विभिन्न तहमा गरी ३ हजार ८ सय ३१ पदसंख्यामा नयाँ भर्नाको दरखास्त आह्वान गरेको छ । आज
नेपाल मगर संघ,शाखा कतारको अध्यक्षमा बिजय कुमार मगर
विवेक पुलामी मगर,/ कतार नेपाल मगर संघ,शाखा कतारको१३औं महाधिवेशन तथा १९औं वार्षिकोत्सब-२०१९” कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ५न. प्रदेशलाई एकीकृत मगरात स्वायत्त प्रदेशको घोषण गर्न माग
अदालतले रबि लामिछाने बिरुद्ध निर्णय सुनाएपछि हात हल्लाउदै गए (भिडियाे)
नुवाकाेट ३१ साउन- चितवन जिल्ला अदालतले रवी लामिछानेसहित ३ जनालाई अनुसन्धानका लागि भन्दै ५ दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप गरेको छ । न्यायाधीश विनोदकुमार